Israely: Tsy Manaja Ny Sabata i Harry Potter? · Global Voices teny Malagasy
Israely: Tsy Manaja Ny Sabata i Harry Potter?
Voadika ny 15 Jona 2017 3:46 GMT
Vakio amin'ny teny Português, 日本語, Español, Français, македонски, English
Tonga tao Israely nandritra ny Sabata Jiosy ny fampiarahana manerantany ny fampahafantarana ny Harry Potter sy ny Sisa-paty, andro izay takian'ny lalàna Israeliana mba hikatonan'ny orinasa. Na izany aza, nanatontosa gala tao amin'ny seranan-tsambon'i Tel-Aviv ny Steimatzky, fivarotam-boky lehibe indrindra ao Israely, mba hampahafantatra ny boky tamin'ny ora voatondro. Nangataka tamin'ireo fivarotam-boky lehibe indrindra ao Israely ny ministry ny indostria, ny varotra sy ny Asa mba tsy hivarotra ny boky fizarana farany Harry Potter mandritra ny Sabata fa miandry ny fiafaran'izany. Mikasa hametraka onitra sy hitory ireo magazay izay manitsakitsaka ny lalàna Israeliana momba ny ora fiasana izy.
Mbola notontosain'ny Steimatzky ihany ny lanonana araka ny voatondro, nahasarika mpankafy liana an'arivony tamin'ny alina [izany hoe, Zoma 20 Jolay]. Voaràran'ny lalàna Israeliana ny mampiasa mpiasa Israeliana amin'ny andro Sabata. Saingy raha ny tena marina, efa maro ireo orinasa misokatra sy mavitrika mandritra ny andro Sabata. Na dia mety ho voasazy handoa lamandy aza, mampidi-bola ho an'ny ankamaroan'ny orinasa ny misokatra mandritra ny andro fialan-tsasatra ofisialy. Saingy mifanohitra amin'ny finoan'ny sasany, ny tanjon'ity lalàna ity dia tsy ara-pivavahana ihany, fa ahitana fikasana ara-tsosialy, miaro ny mpiasa amin'ny mpampiasa ihany koa. Mahafantatra ny mpanao lalàna fa zava-dehibe ny fanomezana zo hiala sasatra iray andro isan-kerinandro ho an'ny mpiasa, mpivavaka na tsia mba hiarahana amin'ny fianakaviany. Saingy ao anatin'ny fifaninanana sy ny tontolo kapitalista, rehefa misy ny fangatahana marobe hiala voly mandritra ny faran'ny herinandro, ny herin'ny tsena no mamaly izany na dia mitarika fatiantoka noho ny lamandy aza. Matetika betsaka kokoa ny tombony noho ny fatiantoka.
Bilaogera Israeliana namaritra ny zava-tsarotra sasany amin'izany lalàna izany:
Tsy zava-miafina intsony fa nandritra ny taona maro, nisy ny tsy fitovian-kevitra lehibe teo amin'ny olom-pirenena mpivavaka sy ny tsy mpivavaka, mikasika ny fomba hamahàna ny olana sasany eto amin'ity firenena ity, ny lohahevitra momba ny Sabata no tena olana indrindra. Mamaritra ny Sabata ho andro fitsaharana ny lalàna Israeliana, ary mandrara mivantana ireo raharaham-barotra mba tsy hiasa mandritra izany fotoana izany. Raha ny marina, tsy dia ampiharina mihitsy ity lalàna ity. Jereo ny mitranga amin'izao fotoana izao. Mihamaro ireo orinasa misokatra amin'ny andro Asabotsy, fivarotana lehibe sy faritra fiantsenana hafa no miasa tsy misy olana, ary vokatr'izany, misy ny fifaninanana henjana eo amin'ireo toeram-pivarotana lehibe sy ny fihariana madinika mahaleotena, izay mizaka fatiantoka betsaka satria tsy afaka mampiasa mpiasa amin'ny andro Asabotsy (ary mandoa onitra).
Manontany tena aho raha misy fomba hanamarinana ny fampiharana izany lalàna izany amin'ny fomba mitanila – mamaha zavatra ve ny manery lamandy ho an'ny toeram-pivarotana boky izay mivarotra ny boky Harry Potter amin'ny andro Asabotsy? Hamonjy ny Sabata ve izany? Nahoana ny minisitra no misafidy izany fotoana izany mba hamonjy ny Sabata manoloana ny mpanota amin'ny fisehoana tahaka ny olo-mahery? Aiza i Ely Ishai sy Ravitz isaky ny Asabotsy, andro izay handehanan'ireo Isiraeliana marobe eny an-tsena? Fotoana izao hisafidianana ny fampiharana ny lalàna araka ny tokony ho izy, na ny tsy firotsahana an-tsehatra araka ny mahazatra.
Mbola manontany tena aho raha hanao tahaka izany ny minisitra raha tsy nanakiana ampahibemaso ny finoana ara-pivavahana ny boky lafo. Tsy misy fetrany ve ny fihatsarambelatsihy?
Ity ny sarin'ny afisy nampiasaina nandritra ny gala izay nahasarika mpankafy an'arivony maniry hahazo ny boky vao marainan'ny Asabotsy.